Madaxweynihii hore ee Cuba Fidel Castro oo Baqtiyay + Tarikhdiisa xun uu Soomaaliya ka galay!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Madaxweynihii hore ee Cuba Fidel Castro oo Baqtiyay + Tarikhdiisa xun uu Soomaaliya ka galay!!
Madaxweynihii hore ee Cuba Fidel Castro oo Baqtiyay + Tarikhdiisa xun uu Soomaaliya ka galay!!
Fidel Castro taariikhda Soomaaliya baal madow ayuu ka galay ka dib markii uu si cadaalad darro ah dagaal ugala saftay Ethiopia ayadoo aanay jirin shacabka Soomaaliyeed wax ay u dhimeen. Waxaa uu sabab ka ahaa jabkii ku dhacay ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed qorshahii la rabay in lagu xoreeyo Soomaali Galbeed asagoo xulafo la ahaa xukuumadii koofurta Yemen iyo Jarmalka Bari iyo Soviet Union iyo WARSOW weliba isticmaalaya lacagtii Qadafi.
Fidel Castro iyo Al Mucamar Qadaafi lama oga meesha ay kala imaadeen nacaybka ay u hayeen umadda Soomaaliyeed laakiin dadka siyaasadda indho indheeya qaarkood waxaa ay yiraahdaan nimanku waxay ahaayeen askar amar laga soo siiyo Moskow ee maahayn niman maskaxdooda ku socda halka qaar kalena aaminsan yihiin inay mabda’a hantiwadaagga aad u aaminsanaayeen oo naftooda iyo maalkoodaba u hurayeen fidinta mabdaas iyo meesha siyaasadda la gashay.
Previous PostWar Deg deg: Ciidamada amniga oo gacanta ku dhigay ninkii watay gaari goor dhaw ku qarxay Waddada Afasiyoone!! Next PostSarkaal ka tirsan ciidamada dowlada oo caawa lagu weeraray Muqdisho & khasaare ka dhashay!!